Papillon Chihuahua mix: chọpụta ihe a zoro ezo - Reeddịrị
Ngwakọta a dị egwu nke ụdị egwuregwu abụọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye karịa naanị ndepụta nke aha nnabata mara mma - Papihuahua , Chi-a-pap , Chion , Chihuahua Pappion , na Papchi - ọ bụkwa ngwakọta zuru oke nke onye hụrụ ya n'anya na onye na-alụ ọgụ!
A maara ụmụ obere ụmụaka a maka ama nkịta nkịta na-atọ ụtọ na nchedo ha maka ndị nwe ha.
Kpoo ngwakọta Papillon Chihuahua
Ọ bụrụ na ị na-eche ugbu a ma ị hụla ihe nkịta nwa nkita zoro ezo, gaa n'ihu na-agụ iji chọpụta!
Akụkọ kacha nta na mmalite
Papillon Chihuahua mix ọdịdị
Nnukwu ntị, obi buru ibu: ụdị mmadụ Chion
Ọdịnaya na-emebi emebi: Chion care
Nsogbu ahụike nwere ike
Nkịta a bụ akụ: olee ebe m nwere ike ịzụta otu?
Ikwesiri ịzụta Chion?
The Chion bụ crossbreed n'etiti abụọ nke obere ụdị egwuregwu ụmụaka nwere ụdị dị iche iche: Chihuahua na Papillon.
Ngwakọta Papillon Chihuahua abụghị mgbe ọkara ọkara Chihuahua na ọkara Papillon, n'agbanyeghị-- mgbe ụfọdụ, ndị na-azụ ihe ga-emepụta ụdị agbụrụ dị iche iche.
A maara Chion site na ACHC, DRA , IDCR , na DDKC .
Nke a pint-sized pup sitere na otu n'ime nkịta ochie kacha ochie, Techichi nke Toltec. Isi apụl ha bụ akara ụghalaahịa ha, ma na-amakwa ezigbo mma.
Zute nkịta Chihuahua
AKC ghotara umuaka a di na Otu egwuregwu .
Chihuahuas dị ihe dị ka kilogram atọ n'arọ ma guzoro na sentimita 5-8 (12-20 cm) n'ịdị elu. Oge ndụ ha bụ afọ 14-16.
Papillon 'Butterfly' Nkịta
Zute obere nkịta Papillon
Dogsmụ nkịta a mara mma nwere ike laghachi azụ na 1500s. Na mbu eburu maka mmekorita di nma nke Europe, a na-akpọbu ha 'ndị nzuzu spanel.'
'Papillon' bụ french maka urukurubụba – mgbe ụfọdụ, na Papillon na-kwuru na dị ka 'urukurubụba nkịta.' Aha ahụ pụtara na narị afọ nke 17 mgbe ndị na-azụ anụ were ntị ha na-adabaghị adaba ma zie ha ọtọ ka ha yie nnukwu urukurubụba mara mma.
Papillons bụ ndị nkịta nwere obi ụtọ, obi ụtọ, na ume siri ike na AKC Toy Group. Ha dị ihe dị ka kilogram abụọ na ise (2-5 n'arọ) ma kwụrụ ogologo na 8-11 sentimita asatọ (20-28 cm) n'ịdị elu.
Ha nwere afọ ndụ nke afọ 14-16.
Ma nke ochie amara aha Papillon Fred , o biri ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 27!
Ọdịdị nke Crossbreed na-adaberekarị n'ihe nketa ha n'aka nne na nna.
Ọchịchọ n'ozuzu ya obere ma mara nma jiri obiọma, anya gbara gburugburu na ndị na-apụghị iguzogide eguzogide eguzosie ike urukurubụba ntị nke ya Papillon nne na nna.
Ha na-egwu imi ojii na mkpụmkpụ, spindly ụkwụ nke mere ka ha jiri ọsọ na-efegharị site na ime-ụlọ rue ụlọ.
Chịọnụ ga-enwe ogologo ntutu nwere ogologo ntutu isi ka ọ dabaa na ntị ya.
Kedu otu ụdị egwuregwu egwuregwu ụmụaka a ga-esi buru ibu?
Ọdụdụ bụ nke sized-nke ọzọ - na-eri kilogram anọ ruo iri (1 ka 4 n'arọ). Ha na-eguzo na sentimita 6 ruo 11 (15 ruo 27 cm) ogologo, na-eme ha nkịta zuru oke obibi ma ọ bụ dabara maka ụlọ dum.
Kpachara anya maka ihe a na-akpọ teacupup Papillon Chihuahuas. Ndị na-azụ ihe egwuregwu na-enwe obi ụtọ mgbe ụfọdụ na-agabiga oke ike n'ịgbalị maka ụdị anụ ọhịa pere mpe nke ụwa, ndị a na-abịakarị n'enweghi ihe ọ bụla ma ọ bụghị ọtụtụ nsogbu ahụike na-agbawa obi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ka ọmarịcha Papillon Chihuahua mix puppy dị, vidio a gosipụtara nwatakịrị ọnwa 4 nke bụ ezigbo mma!
Uwe mkpuchi Chion na Agba
Chion bu ọ bụghị hypoallergenic ga-enwe nkezi awụfu.
Uwe ha nwere ike ịdị site na ntutu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ nke dị ogologo, na-enwe ntutu ma ọ bụ na-acha silky.
Ogologo a dabere na nne na nna Chihuahua ebe ọ bụ na Chihuahuas nwere ntutu dị mkpụmkpụ na ogologo ogologo.
Offọdụ n'ime agba ha kachasị acha: Black, Black & Brown, Black & White, Chocolate, Ude, Ọchịchịrị Ọchịchịrị, Fawn, Golden, White.
Nkịta ndị a bụ ịhụnanya, nọ n'ọrụ obere bọọlụ ọkụ n'ihi na ha ketara nke Chihuahua's feistiness na omume na-apụ apụ nke Papillon.
Zute Mason, the Papillon Chihuahua mix - Isi ihe onyonyo
Ọchịchọ na-adịkarị jụụ ma na-anakọta, mana ha ga-enwerịrị nwa ike ofụri usen.
The Chion nwere ike ịdị obere, mana mgbe ọ ga-enweta mbugharị – lee anya!
Nkịta ndị a bụ nwere ọgụgụ isi ma họrọ ime ihe ọ bụla masịrị ha n’ihi na ha nwere nnwere onwe na isi ike.
Oge ọzụzụ dị mkpa na ụdị isi ike dị otú ahụ, nke na-egwuri egwu, mana ọ kacha mma ka ha dị mkpụmkpụ ma na-atọ ụtọ- dị ka nwa bebi gị! - ma ọ bụ na ị ga-atụfu anya ha. O nwere ike buru ndi nche kacha nta nke ị huru.
Ha na-eme ezigbo obere nkịta na-eche nche - n'ezie, nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe na-adịghị mma ha àgwà ịkwa ụja gabigara ókè.
N'agbanyeghị ọdịdị nchedo ha, Chion chọrọ ụlọ ọrụ ma ọ gaghị eme nke ọma na ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ ezinụlọ ndị na-apụkarị n'izu n'ihi na ha nwere ike ibulite nchegbu .
Kpachara anya na nkịta ndị ọzọ, dịka Chion nwere ike inwe ọchịchọ ime ihe ike na nkịta ndị ọzọ, ọbụna ụdị buru ibu karị, ma ọ bụrụ na ejikọtaghị ya nke ọma. The Chion nwere ike ịdị mma na anụ ụlọ ndị ọzọ ma ọ bụrụhaala na anụ ụlọ ndị ahụ dị jụụ ma debe ya.
N'ihi omume ekworo ha, ha chọrọ ka uche onye nwe ha niile. Iji mezie nke a, leghara nkịta gị anya ozugbo ọ na-agagharị.
Mmekọrịta oge mbụ na ụdị nkịta niile dị mkpa iji nwekwuo ike ịnabata ya, na-eme nke ọma.
Nkuzi ọzụzụ na nkwalite dị mma ọzụzụ dịkwa oke mkpa nye Chion gị makana ọ bụrụgodi na ị nọ n'ụlọ ọtụtụ nke oge, ị ka ga-achọkwa udo nke obi ịmara na fido ga-adị mma n’ụlọ ka ị na-ere nri.
Nkịta ndị a pere ezigbo aka ma na-esighị ike ka ụmụaka jide aka. Ha ga-eme nke ọma umuaka okenye ndị ghọtara otu esi adị nwayọ ma dịkwa nwayọ.
Dogsmụ nkịta e ji egwuri egwu ndị nwere ụdị nchebe a na-agụsi agụụ ike bụ ndị a ma ama maka “ọrịa nkịta nta.” Ihe ejiri mara nke a bụ ihe ike na ịnwe ike nwere ike ịdị ize ndụ maka ndị mmadụ, ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ.
Ọrịa na-adịkarị njikere iji ezé ha chebe onwe ha pụọ ​​n’ihe egwu egwu. The Chion chọrọ onye na-eme ihe ike nke na-eme dị ka onye isi dịka ịhụnanya na ịhụnanya. Nkịta ndị a chọrọ iwu.
Ha na-achọ onye nwe ya ma ọ bụ onye ọzụzụ ya siri ike na ndidi; na-agbanwe agbanwe.
Zute Christina, nkịta Chion - Isi ihe onyonyo
Ngwakọta Papillon Chihuahua nwere ike ịtụ anya ntakịrị pamperi. Ọ bụ ezie na ha bụ ndị na-adịtụ obere mmezi ìgwè, ha obere gbara ajọ dimkpa chọrọ ụfọdụ extra anya na ịhụnanya na upkeep.
Mmega chọrọ maka Pap Chi
Ọ bụ ezie na nkịta ndị a adịghị mkpa ton nke mmega ahụ ma site na ndina ndina (ma ọ bụ lap), na-agbanye mgbidi, ha ka kwesịrị ịchụpụ ume site na igwu egwu ma n'ime ụlọ ma n'èzí.
Ha chọrọ ọ dịkarịa ala mmega ahụ 30 nkeji kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na mpụga, pụọ oge egwu ga-adaba na nchekwa , yad kasị mma. The Chion ga-enwekwa obi ụtọ inwe oge igwu egwu n'ime ụlọ, na-eme ka ha bụrụ ezigbo nwa akwukwo maka ndị agadi.
Nyekwa ihe ụmụaka ji egwuri egwu n’ime ụlọ ka ị na-ejikwa Chion gị rụọ ọrụ nke ọma, n’ihi na Chion gwụrụ ike otu mbibi .
Atụmatụ maka Grooming nke urukurubụba
Udi nke edozi gị Chion chọrọ ga-adabere na uwe nke ọ ga-enweta. Otu na ezigbo brushes otu izu ga-ezuru uwe dị mkpụmkpụ ma gbochie tangles. Ọtụtụ ụbọchị ruo ụbọchị ọ bụla kachasị mma maka uwe ogologo.
Na na na - Mickey, the Chihuahua Papillon mix Isi ihe onyonyo
Nke a bụ iji dobe agụụ ha na mmanụ ha.
Jiri mkpịsị aka gị mebie tangles ọ bụla, ka ị ghara imerụ nkịta gị. Na ihu ọma, uwe mkpuchi Papillon bụ silky, yabụ na mbute nwere ike ọ gaghị abụ nsogbu.
Echefukwala idozi ya edenyere urukurubụba ntị! Wepụ buildup ọ dịkarịa ala otu ugboro n’izu iji gbochie ọrịa, yana.
Gị Chion's anya na-ama jijiji ga-acho nlebara anya anya n'ihi na ha na-achota otutu uzuzu ma nwee ike ibute oria.
Akwadoro m mgbe nile ịkpụcha mbọ . Kedu oge niile ga-adabere n'otú mmega ahụ gị na-eme. Ọ bụrụ na ahụ erughị ala gị na-ehichapụ mbọ nkịta gị, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-edozi ihe, ha ga-enwe ike inye aka!
Gịnị ka ị kwesịrị ịzụ a Chion?
Ka 1 cup of High-quality kibble gbawara n'etiti Nri 3-4 kwa ụbọchị iji nọgide na-enwe ogo shuga n'ihi na a maara obere nkịta na-ata ahụhụ Hyperglycemia .
Ha kibble kwesịrị ịdị elu ma nwee vitamin, emere maka obere ma ọ bụ ụdị egwuregwu ụmụaka. Ha na-emekwa nke ọma na nri ọkụkọ.
Mịrị kibble na-enyere aka ịlụ ọgụ ọrịa oge , nke nne na nna na-adịkarị mfe.
Papillon Chihuahua ngwakọta bụ n'ozuzu ha ike na ndụ 10-15 afọ .
Otú ọ dị, obere ahụ dị mma nke ukwuu na-abịa na nsogbu ahụike ole na ole na mgbakwunye na nsogbu anya na ezé m kwuru na mbụ:
Agba dilution Alopecia
Fontanel (ntụ dị nro na okpokoro isi; ebe dị nro nke chọrọ nchebe iji zere mmerụ ahụ)
Canine myxomatous ma ọ bụ degenerative mitral valve ọrịa (MMVD)
Okpukpe mkpụrụ ndụ ihe nketa nke Chion dị n’etiti obere ụdị abụọ nwere ike iwusi ike ha izere ọrịa. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa ịghọta nsogbu nwere ike ịnwe canine a ka ị wee mara ihe ị ga-ele anya.
Zute Nellie, nke Papihuahua nkịta - Isi ihe onyonyo
Ọnụ ego Papillon Chihuahua nwere ike ịbụ $ 200 ka $ 750.
Ha dị ntakịrị ọnụ karịa ngwakọta Chihuahua ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ n'ihi na Papillons bụ ụdị ụkọ na-adịghị ahụkebe.
Papillon Chihuahua mix breeders
Ebe ọ bụ na ngwakọta ndị a dị obere, enwebeghị m ike ịchọta onye na-azụ akwụkwọ Papillon Chihuahua a ma ama.
Ngwunye puppy na ndị na-azụ ihe na-enweghị isi nọ ebe niile ma na-awụlikwa elu na bandwagon onye mmebe ozugbo ewepụtara ọhụụ ọhụrụ.
Ọtụtụ nkịta na-ejedebe na ebe obibi- M na-agba gị ume ka ịchọọ nnapụta kama ndị na-azụ ihe.
Nnapụta Chion: Nabata. Adịla ahịa!
You nwere ike ịchọta Chions na ndị ọzọ Chihuahua ma ọ bụ Papillon mixes site PuppyFinder . Achọpụtala m ụfọdụ saịtị nnapụta Papillon na Chihuahua ka ị gụọ:
Ezigbo ụmụ akwụkwọ
Chichis na mu
Izute Kuki, Papillon Chihuahua mix - Isi ihe onyonyo
M nwere agwakọta mmetụta banyere nke a mara mma obere ụdị-dị ka Chion mmetụta uche banyere ịbụ nke hụrụ n'anya ma ikekwe ihe ike ike.
Ọ bụ ezie na ha na-adọrọ mmasị n’ụzọ dị mma n’oge ụfọdụ na nnukwu nhọrọ maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị agadi, nnwere onwe ha na nwetụrụ amụma na-enweghị atụ ga-eme ka onye ọ bụla kpachara anya.
N'ikwadoghị, fragility ha chọrọ onye nwere mmetụ dị nro.
Ihe zoro ezo, ma ọ bụ dud? Kedu ihe ị chere?
Pomsky, A Triple-A Crossbreed: Dị Mma, Na-arụsi ọrụ Ike, Na-agbanwe agbanwe
Igbe enyemaka: echiche, atụmatụ na otu esi ewu ewu
àgwà ochie uhie uhie imi mara mma
ogologo ntutu nwere ihu abụọ dachshund
ihe bụ terrier mix
kedu ihe bụ akpa n'akpa uwe
odo lab vs ọlaedo retriever